I-Pestani emangalisayo yi-Ohrid Lake - I-Airbnb
I-Pestani emangalisayo yi-Ohrid Lake
Ohrid, UMntla Makedoni
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguRose
Izinyathelo nje ukusuka elunxwemeni olunolwandle olunezixhobo zemidlalo yamanzi, Indawo yokuhlala yaseLile Pestani ine-Wi-Fi yasimahla, indawo yokupaka yasimahla kunye namagumbi aneebhalkhoni kunye nentambo yeTV. Indawo yokutyela, iivenkile kunye nesikhululo sebhasi sasekhaya zonke ziphakathi kweemitha ezili-100.
Apartments Lile Pestani
Izinyathelo nje ukusuka elunxwemeni olunolwandle olunezixhobo zemidlalo yamanzi, Indawo yokuhlala yaseLile Pestani ine-Wi-Fi yasimahla, indawo yokupaka yasimahla kunye namagumbi aneebhalkhoni kunye nentambo yeTV. Indawo yokutyela, iivenkile kunye nesikhululo sebhasi sasekhaya zonke ziphakathi kweemitha ezili-100 ukusuka kwipropathi.
Igumbi ngalinye linefriji, ikhitshi kunye nomatshini wekofu. Unokwenza nokusebenzisa ikhitshi ekwabelwana ngayo kumgangatho ophantsi okanye uphumle kwigadi ejikeleze indlu. Amagumbi oSapho eza ne-air conditioning.
Iinkonzo zemoto, ibhayisekile kunye nezikhephe ziyafumaneka kwindawo ekufutshane. Uhambo lwesikhephe ukuya e-Ohrid lunikezelwa ngokunjalo. Imyuziyam yasePeštani emanzini ikumgama weekhilomitha ezi-2, ngelixa i-Monastery yaseSaint Naum eyimbali ikumgama we-17 km.
IPeštani ibekwe emazantsi eGaličica Mountain National Park, apho iindwendwe zinokuhamba intaba kunye neparagliding. Isikhululo samapolisa siphambi kwesakhiwo. I-Ohrid kunye nesikhululo seenqwelomoya samazwe ngamazwe siku-15 km ukusuka eLile Pestani.
Sithetha ulwimi lwakho! Amagumbi ehotele: 16
IiApartments zeVilla Lile zikude kumgama weemitha ezingama-20 kuphela zeOhrid Lake Shore. Iiflethi ezinobunewunewu ziya kuqinisekisa ukuba uzive ngathi ulikhaya, kwaye zibonelela ngomoya ofudumeleyo wendawo yokuhlala. Indlu eNtofontofo inegumbi lokuhlala, ikhitshi, izindlu zangasese, i-cable tv kunye ne-intanethi engenazingcingo.Kukho iintlawulo ezongezelelweyo zesidlo sakusasa ngee-euro ezi-3 ngomntu ngamnye. Sinika izitya zemveli zaseMacedonian, ofuna ukuzama.
Siququzelela ukuhamba ngenqanawa kwabo bafuna ukuloba. Iindwendwe zingahamba kwaye zihambe kunye nam okanye zikhokele!
Umbuki zindwendwe ngu- Rose
Ixesha lokubhalisa xa ufika: 08:00 - 23:00
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ohrid